Emazantsi Georgia Escape
Ifakwe kwimizuzu engama-20 emazantsi e-Georgia National Fairgrounds, iiFama zeSkye eziNtsha zinokufunyanwa phantsi kwenyani, iGeorgia Red Dirt Road kude kuko konke ukuphithizela kobomi bemihla ngemihla. Ibekwe embindini we-50 eyimfihlo yeehektare, ikhabhathi ekude ikhupha ukuphumla kunye nokuhlala kwilizwe.
Le acreage ibiyelwe ngocingo olubiyelweyo kunye nesango elingenamasango olona lwabucala. Nokuba uze kuloba echibini, jonga izilwanyana zasendle okanye ujonge nje ezitulweni ezikwiveranda engasemva, le yindawo yakho.
Ngaphandle, ikhabhinethi ibonelela nge-10 ft. Ukusonga okubanzi malunga neveranda ukonwabela zonke iimbono zefama ezinikezelayo. Konwabele ukuloba ukusuka elunxwemeni lwechibi okanye ukosa isidlo sasehlotyeni ngaphandle.
Ngaphakathi, umgangatho ophambili ubonelela ngeplani enkulu, evulekileyo yomgangatho kunye nekhitshi le-gourmet yokonwabisa. Umgangatho ophambili unegumbi lokulala elikhulu kunye negumbi lokuhlambela eliyi-en suite, elineshawa yokuhamba kunye nebhafu enkulu yeJacuzzi.
Phantsi kwezitepsi ezi-spiral ezizodwa ukuya kumgangatho ongaphantsi uya kufumana amagumbi amabini ongezelelweyo eendwendwe, ibhafu epheleleyo, kunye nendawo enkulu yokuhlala. Umgangatho ongezantsi ubonelela ngeengcango ngaphandle kwepatio yangasemva kwinqanaba eliphantsi.
Ukukhutshelwa ngaphandle elizweni kwenza oku kuhlala kukhetheke ngokwenene. Abamelwane bahambe kude kakhulu ukuze ulindele ukuhlala ngokuzolileyo.
Abanini bazo baya kufumaneka kumgama weyure wokuqhuba ukuba kukho nantoni na engahambi kakuhle ngexesha lokuhlala kwakho okanye baya kufumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile.